मासु खादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? - Kamana News
‘मासु’ हाम्रो खानामध्यको एक महत्वपूर्ण परिकार हो । मानिसले मासु खान थालेको एक इतिहास नै रहेको छ । ढुङ्गे युगदेखी नै मासु खाने परम्परा रही आएको छ । मासुमा बढी मात्रामा प्रोटिनका साथै हाम्रो शरिर र मस्तिष्कको विकासको लागी चाहिने प्रोटिन आवश्यक तत्ब्व रहेको हुन्छ त्यसैले हामीले मासु खाने गर्छाँै ? तर के हामीलाई थाहा छ ? मासु खाँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर ।
मासु खाँदा हामीले धेरै नै ध्यान दिनु पर्दछ । किनकि मासुबाट पनि धेरै किसिमका रोगहरु सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
जस्तो अहिले फेरी नेपालमा बर्डफ्लु देखीएको छ । बर्डफ्लु एक प्रकारको भाईरस हो, जुन जनावरको मासु, प्वाँख, सिगान, र्याल, सुली, दाना ,अण्डा, राख्ने क्रेट, दाना राखेका बोरा लगायतको सम्पर्कबाट सर्छ । बर्डफ्लु लागेको पंक्षीको मासु सेवन गर्दा मानिसमा पनि यो रोग सर्दछ । विगतमा नेपाल लगायत बाहिरी मुलुक नागरिक पनि यो रोगकको सिकार भईसकेको छन् । मासुजन्य खाद्यबाट सर्ने यो रोग सामान्यतया नाङगो आखाँले देख्न सकिदैन । र पत्ता लगाउन पनि सकिदैन । तसर्थ सकेसम्म घरमै पालेको जनावरको मासु सेवन गर्दा त त्यत्ति धेरै सोच्नु र बुझ्नु नपर्ला तर बाहिरबाट किनेर ल्याउने माँसु खाँदा भने विशेष नै ध्यान दिनुपर्दछ ।
त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले पशुपंक्षी बजारमा पठाउनु अघि विशेष चेकजाँच नगरे बिरामी तथा रोग भएको पशुपंक्षी बजारमा पुग्ने हुदाँ र सर्बसाधारणले त्यस्ता रोगी पशुपंक्षीको सेवन गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा बिभिन्न समस्याहरु आउने गर्छ । यो कुराहरुबाट हामीहरु पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको छ ।
मासु चराचुरुङ्गी तथा पशुको बढी मात्रामा खाईन्छ । कुखुरा, हाँस, खसी, भैसीँ, हरिण,च्याङरा,खरायो,बटाई,परेवा, सुंगुर, टर्की, बदेल आदी जातीका मासुको प्रकारको धेरै मानिसले रुचाएको देखिन्छ । सबै मानिसको आआफ्नो मासुको चोईस रहेको हुन्छ । बजारमा बिभिन्न मासुको परिकारहरु पाउने गर्छन भने आआफ्नो स्वाद अनुसार ग्राहकहरुले किन्न पाउछन् । ग्राहकले किन्दा चिटिक्क परेका ठाउँमा किन्ने गरेको तथा प्याकेटमा सजिलै पाएता पनि मासु ताजा छ वा छैन।
मासुको स्वास्थ्य बारे, मासु जुन जनावरको हो त्यस जनावरको काटिनु अघिको स्वास्थ्य बारे थाहा पानउनु पनि अति आवश्यक रहेको हुन्छ। जनावरहरुमा पनि विभिन्न सरुवा रोगहरु लाग्ने हुदाँ यदी हामीले सही तरिकाले नपकाएको खाएमा फुड पोईजन तथा अन्य रोगहरु पनि सर्ने सम्भावना बढी रहेको हुन्छ । मासु बजारमा जताततै पाईने गरेको हुन्छ । मासु किन्दा कति ताजा हो ? कति समय भयो काटेको भनेर पसलेलाई सोेधेर मात्र लिनु अझ उपयुक्त हुन्छ ।
मासु खाने व्यक्तिले यी कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक
मासु बेच्नेले मास्क, पंजा लगाएको छ वा छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
मासुलाई १०० डिग्री भन्दा बढीमा पकाउने गरौँ ।
मासुलाई तातो पानीमा केही समय राखौँ र सफासंग धुने ।
मिलेसम्म मासु अगाडी काटेको किन्ने ।
मासु पकाउदाँ राम्रोसंग १०० डिग्रीमा पकाउने ।
मासु खाएर तुरुन्तै केही असर देखिएमा चिकित्सक कहाँ जानु आवश्यक हुन्छ ।
मासुजन्य परिकारको प्रयोग सचेत भएर गरौँ । रोग लाग्नबाट बचौँ ।
मासु, माँस या मासु ती प्राणीहरूका र मुख्यतः मांसपेशीहरूलाई भनिन्छ, जसको सेवन भोजनको रूपमा पनि गरिन्छ। मासु शब्दलाई बोलचाल र व्यावसायिक वर्गीकरणको आधारमा पृथ्वीमा रहने पशुहरूको मासुको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ ९मुख्यतस् कशेरुकीस् स्तनधारी, पक्षी र सरीसृप०, जलीय मतस्य जीवहरूको मासु माछाको श्रेणीमा जबकि अन्य समुद्री जीव जस्त कि क्रसटेशियन, मोलस्क आदि समुद्री भोजनको श्रेणीमा आउँछन्। त्यस्तै यो वर्गीकरण पूर्णतस् लागू हुँदैन र धेरै समुद्री स्तनधारी जीवहरूलाई पनि कहिले मासु र कहिले माछा मानिन्छ। पोषाहारको दृष्टिले मानवको भोजनमा मासु, प्रोटीन, वसा र खनिजको एउटा गतिलो र राम्रो श्रोत हो। सबै पशुहरू र वनस्पतिहरूबाट प्राप्त भोजनहरूमा, मासुलाई सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा अधिक विवादास्पद खाद्य पदार्थ पनि मानिन्छ। जहाँ पोषणको दृष्टिले मासु एक पोषाहार हो त्यहीं विभिन्न धर्म यसको सेवनसित आफ्ना अनुयायीहरूलाई टाडा रहने सल्लाह दिन्छन्। जो पशु पूर्ण रूपले आफ्नो भोजनको लागि मासुमा निर्भर हुन्छन् तिनलाई मांसाहारी भनिन्छ, यसको विपरीत, वनस्पति खाने पशुहरूलाई शाकाहारी भनिन्छ। जो वनस्पति साना जीवहरू र किराको सेवन गर्दछन् मांसभक्षी पादप भनिन्छ।
आइतवार, माघ १८ २०७७०३:२५:४१